Iimveliso ze-SPL ezisebenza kuMzi mveliso weFriji
Ngaphandle kwesiqandisi bekungazukukwazi ukonwabela iziqhamo kunye nemifuno yamaxesha amatsha unyaka wonke. Ngaphandle kwesiqandisi asinakucinga ukuba inkqubela phambili yenzekile kwicandelo lokhathalelo lwempilo lwehlabathi, ezorhwebo, ezamashishini, zokuhlala kunye nezolonwabo.
Ngabemi abakhulayo kunye nokutshintsha kwemikhwa yokutya, ukuphucula ukusebenza kwamandla kwezixhobo zefriji zorhwebo nezamashishini kubalulekile kubathengi abafuna ukunciphisa iindleko zokusebenza. Le yinto ephambili kwishishini lokulungisa ukutya, apho imida yenzuzo imxinwa.
I-SPL evaporative Condenser kunye neenkqubo zefriji yefriji yeAIO ihambisa ukusebenza okuphezulu kunye nokusebenza okuthembekileyo kubathengi bayo okonga isixa esikhulu semali.
Kwi-SPL, siziingcali kuyilo olwenziwe ngokwezifiso, luxhaswe yiminyaka yokwenziwa kwezinto ezintsha kunye nokusebenzisana ngokusondeleyo nabathengi kunye namaziko ophando. Sivelise izisombululo ezikhokelela kwimarike kuluhlu olubanzi lwezicelo, ukusuka kubisi, ukutya kwaselwandle, inyama, kunye nezinye iziqhamo kunye nemifuno yokulungisa imifuno.